UN: 20 Sano Kadib Soomaalidu Miyiga Waa Ka Dhamaanayaan Abaaraha Dartood • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / UN: 20 Sano Kadib Soomaalidu Miyiga Waa Ka Dhamaanayaan Abaaraha Dartood
UN: 20 Sano Kadib Soomaalidu Miyiga Waa Ka Dhamaanayaan Abaaraha Dartood
Isku-Duwaha Qaramada Midoobay ee Arrimaha Bani’aaddinimada u qaabilsan Soomaaliya, Peter de Clercq ayaa booqasho ku yimid Waqooyiga Soomaaliya, gaar ahaan xarunta Somaliland ee Hargeysa waxaana booqashadiisi kadib laga soo saarey war saxaafadeed ka digaya saameynta abaarta goboladan ka taagan.
Peter de Clercq ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in sare loo qaado awoodda soo kabsashada bulshooyinka si ay uga adkaadaan saameynta abaaraha soo noqnoqda, sida macluusha.
“Kaddib sanad oo aan si wadajir ah dadaal badan u sameynay, anaga oo ka hortagnay macluul, ma dooneyno in aan kaliya dhahno dib ayaan u dhignay, waxa aan dooneynaa in aan dhano si guul ah ayaan ula dagaalannay ugana adkaannay macluul,” ayuu yiri Isku-Duwaha Qaramada Midoobay ee Arrimaha Bani’aaddinimada u qaabilsan Soomaaliya, Peter de Clercq.
“Taageeridda dadka ku sugan xaalado degdeg ah isla markana la dhiso awoodda dib u soo kabsashada,” ayuu yiri, “waxaa ay gacan ka geysan doonaan in macluusha xiga laga hortago, oo aan kaliya dib loo dhigin.”
Isku-Duwaha Qaramada Midoobay ee Arrimaha Bani’aaddinimada u qaabilsan Soomaaliya, Peter de Clercq ayaa hadalkan ka jeediyay magaalada Hargeysa ee caasimadda ‘Somaliland,’ halkaas oo uu la kulmay madax heer sare iyo wakiillada bulshada rayidka. Mowduuca muhiimka ah ee uu ka duulayay ayaa waxaa uu ahaa in iyada oo sanadkii 2017-kii laga hortay in ay macluul ka dhacdo waqooyiga bari ee Geeska Afrika, taasi oo lagu aaneynayo dadaallada Soomaalida iyo bah-wadaagta caalamiga ah, waxaa weli taagan halista loogu jiro macluul la xiriirta abaaraha, iyada oo malaayiin qof oo ku nool gobolka ay weli baahi weyn u qabaan gargaar bani’aaddinimo oo nolol-badbaadin ah.
“Dadaallada bani’aaddinimo waa arrinta aan siineyno mudnaanta koowaad,” ayuu yiri. “Dabcan, waa arrinta koowaad ee aan ku hayno maskaxdeenna.”
Natiijooyinka ka soo baxay qiimeynta baahida ee saameynta abaarta ee dhowaan la sameeyay oo ay hormuud ka ahaayeen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira, oo gacan ka helayay bah-wadaagta caalamiga ah, ayaa muujinaya in sugnaansho la’aanta cunnada iyo tirada badan oo dadka oo saldhig ka dhiganaya magaalooyinka ay yihiin qaar ka mid ah arrimaha horseeday xaalad bani’aaddinimo oo degdeg ah.
“Waxaa noo muuqdaa barakac fara badan,” ayuu yiri mas’uulka ka socdey Qaramada Midoobay. “Waxaan arkeeynaa caasimadaha iyo magaalooyinka ‘Somaliland’ oo horumar sameynaya, iyo tiro badan oo dad danyar ah oo ay ka baaba’een xoolahooda iyo hab-nololeedkooda oo imanaya magaalooyinka ayaga oo rajeynaya in ay helaan taageerro iyo kaalmo – dadkaan intooda badan dib uma laabanayaan.”
Isku-Duwaha Arrimaha Bani’aaddinimada oo sidoo kale ah Ku Xigeenka Wakiilka Gaarka ah ee Xog-hayaha Guud ee Qaramada Midoobay u fadhiya Soomaaliya ahna Isku-Duwaha Howlaha Qaramada Midoobay ayaa kulammadiisa ku shaaciyay in dadaallada gargaarka degdegga iyo dhismaha awoodda dib u soo kabsashada ee muddada dheer aysan is diideynin, balse ay is waafaqsan yihiin, loogana gol leeyahay in laga adkaado abaaraha iyo macluusha soo noqnoqda.
Mr de Clercq ayaa intaasi raaciyay in muddo toban ilaa iyo 20 sano kaddib, ay ku dhowaad boqolkiba 80 bulshada ka mid ah ay ku noolaan doonaan magaalooyinka iyo caasimadaha, isla markana aan lagu tiirsanaan doonin xoolaha nool iyo hab-nololeedka reer- guuraaga, asaga oo xusay in, “qoshaheenna, waa in aan ku darno xaqiiqadan.”